Bad Piggies dia havaozina amin'ny haavo sy fitaovana vaovao | Vaovao IPhone
Bad Piggies dia havaozina amin'ny ambaratonga sy fitaovana vaovao
Rovio tsy amin'ity fahavaratra ity. Fantatra fa amin'izao fotoana izao dia mitombo ny fotoana malalaka an'ny mpampiasa maro, dia mamoaka fanavaozana ny lalao misy azy ho an'ny iOS ny Finn, ary Bad Piggies, izay tsy ny "kisoa ratsy" amin'ilay horonantsary intsony ny kisoa no lasa mpiorina , vao nohavaozina tamin'ny haavo vaovao, fitaovana vaovao, maodely lalao vaovao ary fomba iray hafa ahazoana herinaratra.
Amin'ity fanavaozana vaovao ity, azo alaina ho an'ny iPhone na iPad, hanana ireto fanovana manaraka ireto isika:
Haavo vaovao 30 ho an'ny sehatra Rise & Swine
Herinaratra vaovao toa ny Super Magnet, Super Glue, ary Turbo hanampy anao handositra toe-javatra sarotra.
Zava-baovao: ny «hook grappling», farango azonao atsipy ary misaotra azy io dia manosika anao, miakatra ary manatanteraka pirouettes hahatratra ny tanjonao.
Super mekanika izay hanampy anao hahazo fiara kintana 3 amin'ny ambaratonga rehetra. Azonao atao ny mahazo azy io na mividy azy hampiasaina.
Angony ny tsindrin-tsakafo mandritra ny lalao atolotray any amin'ny Pig King izay hanome anao herinaratra sy zavatra hafa ho takalon'ny famitana ny haavonao.
Ity fanavaozana ity dia tsy mitondra safidy hampiasaina amin'izao fotoana izao Kaontin'i Rovio handrindrana ny atiny amin'ireo fitaovana (sy amin'ny sehatra rehetra), midika izany fa tsy mila mamerina lalao amin'ny fitaovanao rehetra ianao, na mamoy ny zava-drehetra rehefa averinao amin'ny laoniny ny fitaovanao. Ity fampiasa ity, natombok'i Rovio andro vitsy lasa izay, amin'ny Angry Birds sy The Croods ihany no misy, fa i Rovio dia nanome toky fa hanitatra azy ireo amin'ny lalao rehetra ato ho ato. Hampahafantatra anao izahay raha vantany vao misy fampahalalana bebe kokoa momba ity safidy mahafinaritra ity mba hamonjy ny lalao an-tserasera. Bad Piggies dia misy amin'ny kinova ho an'ny iPhone sy iPod Touch, ary ny iray hafa ho an'ny iPad, samy amin'ny vidiny 0,89 euro avy.
Fanazavana fanampiny - Angry Birds dia efa mandrindra ny lalao ao anaty rahona
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Bad Piggies dia havaozina amin'ny ambaratonga sy fitaovana vaovao
Ireto ny bug izay mila amboarin'i Apple amin'ny beta fahefatra amin'ny iOS 7
Tutorial: mamoha, mamorona ny piraofilin'ny Apn momba ny fifandraisana Internet anao fa tsy mamafa azy irery